पाठेघर क्यान्सर हुनुका कारण
पाठेघरको क्यान्सरअन्तर्गत पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा पाठेघरको भित्रपट्टिको क्यान्सर प्रमुख हुन् । ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गरेको छ । धेरै पुरुषसँग यौन सम्पर्क राख्ने, सानो उमेरमा धेरै सन्तान जन्माउने महिलामा पनि यो क्यान्सर हुन सक्छ । महिलामा हुने सम्पूर्ण क्यान्सरमध्ये स्तनको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर र तल्लो आन्द्राको क्यान्सर पछि पाठेघरको क्यान्सर चौथो […]
मेथीवाट हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हुने फाइदाहरु
मेथी हामी धेरैको भान्छामा प्रयोग हुने गर्छ । भुटुनमा मेथी पड्काउनाले तरकारी तथा अचार बास्नादार र स्वादिलाने बन्छ । यो बाहेक मेथीको अन्य प्रयोग पनि गरिन्छ । सबैलाई मेथीको स्वाद मन नपर्न सक्छ । तर, मेथीले मानिसको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकुल असर भने सबैलाई मन पर्न सक्छ । फरक यति होकी कतिलाई मेथीका फाईदा बारे थाहा […]
वायुप्रदूषणबाट बच्ने उपाय
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार प्रदूषणका कारण विश्वभर हुने मृत्युमध्ये भारतमा सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने गरेको छ । विगत केही वर्षयता प्रदूषणबाट दम, दीर्घ खोकी, फोक्सोको क्यान्सर, ब्रोङकाइटिस, टाउको दुख्ने, मुटुको धड्कन असामान्य हुने र हृदयाघातका रोगीको संख्या तीब्र रुपमा बढिरहको डब्लुएचओले जनाएको छ । प्रदूषणबाट बच्ने उपाय १. घरबाहिर निस्कँदा मुखमा मास्क लगाएर […]
वायुप्रदूषणले फोक्सोमा कसरी असर गर्छ ?
सामान्यतः प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वासको समस्या निम्तने ठानिन्छ । तर फोक्सो, मुटु, मिर्गौला र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि प्रदूषणले असर पार्छ । त्यसमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी असर फोक्सोमै पर्छ । हामीले श्वास फेर्दा हावामा भएको हानिकारक तत्व फोक्सोसम्म पुग्छ र त्यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ । प्रदूषणले फोक्सोमा पर्ने असरहरु: प्रदूषणले फोक्सोमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा वरीपरीको […]
श्वासप्रश्वास एउटा अनियन्त्रित प्रक्रिया हो । श्वास फेर्न हामीलाई कुनै थप उर्जा खर्च गर्नुपर्दैन । तर, राम्रोसँग श्वासप्रश्वास लिएमा यसले स्वस्थ मात्र बनाउँदैन मानिसलाई दीर्घजीवि पनि बनाउँछ । बिहान ५ मिनेट जति लामो श्वास लिने, छाड्ने गर्नुपर्छ । यसरी गरिने श्वासप्रश्वास व्यायायमका केही फाइदा यस प्रकार छन्ः तनाबमुक्त बनाउछ गहिरो श्वासले शरिरमा अक्सिजनको प्रबाह बढाउछ […]
गोलभेडा खाँदाको फाइदाहरु
गोलभेंडाले खानाको स्वाद बढाइदिन्छ र यसमा स्वास्थ्य बढाउने तत्त्व पनि भरपूर हुन्छ । सूप, सलाद र अचारमा गोलभेंडा उपयुक्त हुन्छ अनि यसले छालाको चमक पनि बढाइदिन्छ । गोलभेंडामा भएको पोटेसियम, भिटामिन सी र लाइकोपिन पर्याप्त मात्रामा हुन्छ र कोलेस्ट्रोल घटाउने तत्त्व पनि हुन्छ । पोषक तत्त्वहरूले भरपूर गोलभेंडाको जुस पिउँदा स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ । […]
गर्मीको मौसममा स्वस्थ रहनको लागि उचित फलफूल
गर्मी मौसम सुरु भएसँगै बजारमा विभिन्न किसिमका फलफूलहरु देख्न सकिन्छ । गर्मी मौसममा शरीरलाई स्वस्थ र फूर्तिलो बनाई राख्नको लागि प्रशस्त मात्रामा फलफूलको सेवन गर्नु आवश्यक हुन्छ । १. आँप आँपलाई फलफूलको राजा भनेर चिनिन्छ । आँप खानु स्वास्थ्यका दुष्टिकोणले लाभदायी हुन्छ । यसले शरीरमा शक्ति पैदा गर्छ र आँपलाई २ देखि ३ घन्टासम्म पानीमा […]
उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल हुने व्यक्तिको लागि उपयोगी फलफुल
अहिलेको समयमा उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल शब्द धेरै नै सामान्य भईसकेको छ । हाम्रो समाजमा सबैको साझा रोगको रुपमा उच्च रक्तचाप पर कोलेस्ट्रोललाई लिने गरिन्छ । प्रचलित यी रोगहरुबाट प्रत्येक घरमा कोही न कोही पीडित भएको पाइन्छ । जति सामान्य यी रोग छन् त्यति सजिलै हामीले यसबाट छुट्कारा पाउन सक्छौँ । हामीले प्रयोग गर्ने केही […]
गर्मीको समयमा हाम्रो लागि उपयोगी तरकारी
गर्मी मौसममा खानपानमा अलिकता लापरवाहीले पनि बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ । जाडो मौसमको तुलनामा गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ । यस्तो बेला बढी तारेको या मसालायुक्त खाना धेरै खानुहुँदैंन । फुड प्वाइजनको समस्या हुने पनि यही मौसममा हो । त्यसैले यो मौसममा हल्का या सजिलै पच्ने खालको खाना खानुपर्छ । गर्मीमा यी तरकारी खानु उपयोगी […]
हाम्रो स्वास्थ्यको लागि भुइँकटहरवाट हुने फाइदा, कसले खान हुँदैन ?
भुइँकटहर स्वास्थ्यको फाइदाका हिसाबले अदभूत फल मानिन्छ । यसको खेती कहाँबाट सुरु गरिएको हो भन्नेबारे त्यति स्पष्ट छैन । तर, क्रिस्टोफर कोलम्बसले विश्व भ्रमणपछि सन् १४९३ मा यसलाई युरोप भित्र्याएको अनुमान गरिन्छ । पहिले अमेरिकाको हवाइमा यो ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले पाराग्वे, ब्राजिल, फिलिपिन्स, कोस्टारिका लगायतका देशमा भुइँकटहरको धेरै खेती हुने गरेको छ […]
पुरुषका यस्ता गुणसँग आकर्षित हुन्छन् युवती
प्राय हामी महिलाको सुन्दरताको मात्र कुरा गर्छौ । पुरुषहरुको पनि धेरै कुरा हुन्छन तर कुरा थोरै मात्र गरिन्छ । प्राय सुन्दर तथा गुणवती युवती पुरुषको रोजाईमा पर्छन भने महिलाको पनि पहिलो रोजाई आकर्षक युवा नै हुन्छन । महिलाहरु पनि आफ्नो प्रेमीमा केही गुण अवश्य खोज्छन । आफ्नो प्रेमीकाले तपाईमा कस्तो कुराको अपेक्षा राख्छिन । जुन […]
किड्नी फेल हुनबाट बच्ने उपायहरु
किड्नी मानव शरीरको एउटा अति नै महत्वपूर्ण अ‌ंग हो । तर हाम्रो आफ्नै कारण र हाम्रो खानपान, आहार व्यवहारको अनियमितताका कारण किड्नी फेल हुने गरेको तथ्य सबैलाई थाहा नै छ । किड्नी फेल हुनु भनेको किड्नी खुम्चनु हो । किड्नीमा रहेको नेफ्रोन्स भन्ने अंगले शरीरलाई नचाहिने अनावश्यक फोहोर पिसाबका रुपमा बाहिर पठाउने गर्दछ । तर […]
स्वस्थकर जीवनको लागि अपनाउनुपर्ने टिप्सहरु
स्वास्थ्य जीवनको धन हो तर यो कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि जीवनको खासै ख्याल गरिरहेको हुँदैन सबैको जीवन धेरै व्यस्त छ । त्यसैले पनि राम्रोसँग आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न पाइरहेको हुँदैन । रोजगारी, पैसा र भविष्यको पछि भाग्दाभाग्दै धेरै मानिसलाई आफ्नै शरीरको ख्याल राख्ने फुर्सद छैन । एक हिसाबले जीवन यान्त्रिक बनेको छ । तर, रोजगारी र पैसाभन्दा […]
तपाईको जीवनमा खुसी ल्याउने केहि टिप्सहरु
मानिसको जीवनमा विभिन्न खालका समस्याहरु हुन्छन् कुनै जतिसुकै समस्या भएता पनि कतिले बाहिर देखाएको हुँदैनन् तर कतिले भन्न सकिरहेको हुँदैन कि यो समस्यावाट कसरी टाढा हुने अथवा कसरी जीवनलाई खुसी बनाउने भनेर ? त्यसैले हामी जे गर्छौं, सबैको मूल ध्येय हो सन्तुष्टि एवं खुसी । जो कोहि, चाहन्छन् आफ्नो जीवन खुसीसाथ बितोस् । खुसी खोज्न […]
मिर्गौला पत्थरी भएका व्यक्तिले खान हुने र नहुने फाइदाहरु
मिर्गौलामा हुने पत्थरी (स्टोन) लाई मेडिकल भाषामा रेनल क्याल्कुलाई भनिन्छ । हिजो-आज जीवनशैली र खानपानका कारण मिर्गौलामा पत्थरी हुनेको संख्या बढ्दो छ । पत्थरी विभिन्न कसिमका हुन्छन् र यो विभिन्न कारणले हुने गर्छ । खान नहुने (बेफाइदा गर्ने) १ पालुङ्गो साग २ टमाटर ३ अमला ४ काजु ५ काँक्रो ६ काउली ७ फर्सी ८ च्याउ […]
तिते करेला खादा कतिपयलाई तितो स्वाद मन पर्दैन । तर सकैलार्इ अत्याधिक मन पर्छ । स्वादका हिसाबले मन पर्नु अथवा नपर्नु भन्दा स्वास्थ्यका हिसावले याे निकै फाइदाजनक छ । करेला एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिनले भरिपूर्ण हुन्छ । करेलामा भिटामिन ए, भिटामिन बि, भिटामिन सि, फाइबर, क्याल्सियम, पोटासियम, जिङक, फलाम, कपर तथा फोस्फोरस हुन्छ । तिते करेलामा […]
कुन समयमा खाना खाँदा, हाम्रो शरीरको लागि फाइदा हुन्छ ?
खाना हाम्रो शरीरको लागि महत्वपुर्ण वस्तु हो । जसले हामीलाई विभिन्न कार्य गर्नको लागि शक्ति प्रधान गर्दछ । हामीलाई स्वस्थ रहनको लागि र यो धर्तीमा जीउनको लागि साथ यहि खानाले दिइरहेको हुन्छ । तर हामीलाई यो कुरा थाहा हुँदैन, कुन समयमा कुन खाना खाने भन्ने उचित जानकारी छैन । हाम्रो मान्यता यो छ, जब भोक […]